Ampiasao ao amin'ny automatisation an'i Klaviyo ny marketing automatique anio alohan'ny vanim-potoanan'ny fiantsenana fialantsasatra | Martech Zone
Ampiasao amin'ny alàlan'ny automatisation an'i Klaviyo marketing automatique anio alohan'ny vanim-potoanan'ny fiantsenana fialantsasatra
Alarobia, Oktobra 14, 2020 Alarobia, Oktobra 14, 2020 Douglas Karr
Nandritra ny taona lasa, noraisiko ny andraikitra ara-barotra ho an'ny mpanjifa ecommerce hampitombo ny varotra. Nanatsara ny lafiny rehetra tamin'ny tranokalan'ny ecommerce -nko tamin'ity tranga ity, Shopify. Namolavola modely indray aho, nanisy programa valisoa, nanampy fanaterana teo an-toerana, naka sary vokatra vaovao, pejy pejy nohatsaraina… ary nampitombo ny taham-panovana nomeraon-droa.
Raha vantany vao afaka niantoka ny fiasan'ny tranokala araka ny tokony ho izy sy ny lozisialy ny fandefasana aho dia te-hiasa amin'ny fampitomboana ny vola miditra amin'ny ankapobeny. Ny fanatanterahana ny vahaolana amin'ny automatisation marketing izay nandefa mailaka na nandefa hafatra ho an'ny mpanjifa ary namporisika azy ireo hamita fividianana na hitaona azy ireo hanangana baiko vaovao dia zava-dehibe.
Mampalahelo fa tsy ampy eto ny fitaovan'ny Shopify. Shopify dia manana fahaizana manokana manokana ny fandaozana ny sarety fiantsenana sy ny mailaka hafa - saingy tsy misy ny faharanitan-tsaina na ny fanaovana tatitra matanjaka manodidina azy ireo. Ohatra, tsy nanana fitaovana fizarana sy fandefasana tolotra mifototra amin'ny tantaran'ny fividianana na ny toetran'ny mpanjifa hafa aho.
Klaviyo Ecommerce Marketing automation
Rehefa avy nanao fikarohana tamin'ny Internet aho dia nanapa-kevitra ny hizaha toetra Klaviyo. Tao anatin'ny adiny iray dia novaiko ny fivezivezena automatique marketing ho fitsinjovana ny mpanjifa vaovao, ireo mpitety efa nilaozana izay tsy nanampy entana tamin'ny sarety, mpanjifa mpivarotra entana, mpivarotra entana, ary automatisation cross-sell / upsell namboarina sy nandefa.
Ny fampidirana an'i Klaviyo amin'ny Shopify dia mahatalanjona. Afaka nifandray tamin'i Shopify sy nandevona ny angon-drakitra rehetra momba ny mpanjifa izy, ary avy hatrany dia nanatanteraka fikorianam-bidy marobe. Tamin'ny volana voalohany, ny serasera noforoniko sy namboariko tamin'ny fampiasàn'izy ireo ny tonian-dahatsoratry ny mailaka drag & drop (tsy misy an'io Shopify io) dia nahazo fiverenan'ny fampiasam-bola 2286% ny vidin'ny rafitra. Tsia… Tsy manao vazivazy eo aho.
Ny fampidirana an'i Klaviyo amin'ny Shopify dia ahafahantsika manatanteraka tsara ny paikadim-barotra nomerika na fizarazarana fitondran-tena amin'ny mpividy matetika, fitarihana fitarihana na fikorianana mandeha ho azy.
Mike, mpitantana ny marika Bobo
Miaraka amin'i Klaviyo sy Shopify dia afaka manomboka mandefa fifandraisana manokana sy kendrena tsara kokoa ianao ao anatin'ny segondra vitsy. Klaviyo dia manangona sy mitahiry ny angon-drakitra mifandraika rehetra momba ny mpanjifanao mba hampiasainao handefasana traikefa tsy hay hadinoina, hitarihana fivarotana bebe kokoa ary hiteraka fifandraisana matanjaka.
Misy ny fampidirana an'i Klaviyo's Shopify Ecommerce
Dashboard - Ankoatra ny automatisation marketing, Klaviyo dia manome dashboard e-commerce matanjaka izay azo ovaina tanteraka ary manome ny antsipiriany rehetra amin'ny magazay Shopify anao amin'ny fotoana tena izy.
Ny fivezivezena amin'ny automatisation marketing - Mivezivezy ny trigger miorina amin'ny daty, fisehoan-javatra, mpikambana ao anaty lisitra, na maha-mpikambana azy amin'ny fizarana ary mampiasa fisarahana, sivana, fitsapana A / B, ary maro hafa hikendrena sy hanatsara. Manomboha haingana kokoa amin'ny tranomboky misy ny maodelim-pahefana automatique sy modely mailaka.
Miverina amin'ny fampandrenesana stock - Ny famoahana vokatra dia tsy fivarotana very intsony. Avelao ny mpanjifa hisoratra anarana amin'ny fampandrenesana rehefa miverina miverina ny entana - mora be izany.
Torohevitra momba ny vokatra manokana - Torohevitra momba ny vokatra mora ampiasaina, aotra-setup miorina amin'ny fizotran'ny mpanjifa, ary ny tantaran'ny fividianana.
fampielezan-kevitra - Tsy mila mandefa fivezivezena automatique marketing fotsiny ianao, afaka mandefa mailaka na fanentanana hafatra an-tsoratra isaky ny tianao ny fizarana tianao.
A / B Testing - Andramo mora foana ny tsipika momba ny mailaka sy ny atiny ao anaty ny fizotran'ny automatisation marketing.
Customer Segmentation - Farito ny fizarana tsy misy fetra. Mampiasà hetsika mitambatra, fananana mombamomba, toerana, soatoavina voalaza mialoha, sy maro hafa… amin'ny fotoana rehetra.
Kitapo Dynamic - Mandefasa mora foana ny tapakila ho an'ny mpanjifanao.
Pejy preferences - Amboary marika ary amboary ny pejin'ny safidinao mailaka sy ny mpanjifa finday.
Fahaizana artifisialy - Faminaniana namboarina ho azy ho an'ny sanda mandritra ny androm-piainana, loza mety hitranga, lahy sy vavy, fotoana fandefasana optimum ary ivelan'ny boaty tolo-kevitra momba ny vokatra namboarina.
Marketing amin'ny ecommerce Lifecycle - Manaterza endrika voamarika ho marika hananganana ny lisitry ny varotrao. Avy eo, ampandraiso amina fantsona maro ny mpanjifa ary ampiasao ny vinavinanna mialoha ireo mpanjifa goavambe na tanjona ambony.
Fampiroboroboana ny angona vokatra - Ampifanaraho ho azy ny toetran'ny vokatra amin'ny fizahana, laharam-pahamehana, ary firaketana.
SMS - Ampiasao ny fizarazaran'i Klaviyo mahery vaika sy ny mandeha ho azy hampiavaka ny hafatra an-tsoratra rehetra. Tsotra sy mandeha ho azy ny fitantanana fanekena hahazoana antoka fa halefa amin'ny olona marina ny hafatra.
Manomboha amin'ny Klaviyo maimaim-poana!
Fampidirana Ecommerce iray Click an'i Klaviyo
Klaviyo dia mihoatra ny 70 efa namboarina, fampidirana tsindry tokana miampy API misokatra mba hahazoana antoka fa afaka mahazo mora foana ny angon-drakitrao ao amin'ny Klaviyo ianao nefa tsy manahirana. Ny fampidirana ecommerce novokarina dia misy hampiala anao sy handehananao avy hatrany amin'ny fampiasana:
Shopify ary ShopifyPlus
Fampahalalana: mampiasa rohy afiliana ato amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: mandeha ny mandeha ho azymijery fandaozanaCLVsandan'ny androm-piainan'ny mpanjifaecommerce aiautomatique ecommercemailaka fivarotana ecommercetabilao ecommercefampielezana mailaka ecommercefizarana ecommercemailaka tongasoa amin'ny ecommercemailaka ab fitsapanaKlaviyomagentofividianana mialohashopify ab fitsapanafivarotana tapakilafivarotana automatisation marketingshopifyplussms marketing automatiquefanairana amin'ny stockwoocommerce
Fikendrena ara-potoana: fiarovana fiarovana amin'ny marika amin'ny vanim-potoana tsy misy cookie
Inona no mety ho fiantraikan'ny zava-misy eo amin'ny Internet?